STK eo anivon’ny FJKM Hofanina any Fianarantsoa
Ny tanora ankehitriny no hoavin’ny fiangonana rahampitso.
Mila hofanina sy hampianarina izy ireny ka anisany ny fifankatiavana sy ny fahaizana mifandefitra, indrindra fa ny fitondran-tena mba ho môdely eny anivon’ny fiarahamonina. Amin’ny alalan’ny fihaonam-be nasionaly izay karakarain’izy ireo any Fianarantsoa ny 09 ka hatramin’ny 13 oktobra ho avy izao no hanatanterahana izany, fotoana iray hampiraisana ireo sampana tanora Kristianina manerana ny Nosy ihany koa. Ny komitin’ny faha-45 taonan’ny Sampana Tanora Kristianina sy ny birao STK foibe no hikarakara ny hetsika ka anisan’ny tanjona ny hananana tanora vanona sy vonona hampita ny traikefany amin’ireo fitandremana niaviany avy. Miantso ny tanora rehetra mba samy hiomana amin’ity filasiana ity ny tompon’andraikitra, indrindra ny resaka fitaovana. Ho hentitra ihany koa izy ireo amin’ny fiara izay tsy maintsy miara-miainga avokoa rehefa hiala eto Antananarivo hihazo an’i Fianarantsoa. Fiara efa voajery ara-dalàna ny momba azy sy ny taratasy no entina mandeha hisorohana ny loza mety hitranga tampoka eny an-dalana. Hisy ihany koa ny mpitandro ny filaminana hiaraka amin’izy ireo. Ankoatra ny fotoam-pivavahana moa dia hisy ny fifaninanana lalao baolina kitra ho an’ny tanora lahy sy vavy hotanterahina any an-toerana raha filaharam-be mamakivaky ny tanànan’i Fianarantsoa kosa no hamaranana ny hetsika ny 13 oktobra.